Ny tsiranoka haran-dranomasina dia miparitaka miaraka amin'ny onjan-dranomasina ary mila mitady substrate mety mba hipetraka sy handalo metamorphosis amin'ny polyp voalohany. Ao amin'ny tontolo voajanahary, ny olitra haran-dranomasina dia mampiasa fambara marobe (toy ny hazavana, feo, firafitry ny tany, ary mari-pamantarana simika) hisafidianana hoe aiza amin'ny haran-dranomasina no hipetrahany sy honenan'izy ireo, mety ho an-jatony taona maro. Ho an'ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny fampielezana ny lozam-pifamoivoizana, ny fametrahana vato harana vaovao eny amin'ny haran-dranomasina dia mahomby amin'ny famporisihana ny fanarenana ny haran-dranomasina. Ny famporisihana ny fametrahana ny olitra kolontsaina dia matetika amin'ny fomba roa: mivantana amin'ny haran-dranomasina na mankany amin'ny substrate artifisialy ho avy eo outplanting.
Fametrahana mivantana ny haran-dranomasina mivantana
Amin'ireto fomba ireto, ny olitra amam-borona dia notezaina avy amin'ny gametes nangonina ary avy eo nentina tany an-tsaha tamin'ny harona plastika lehibe talohan'ny nanombohan'ny fametrahana. ref Foana ny kitapo ary tazomina hitazona ao anaty vala mesh mivantana amin'ny faritra misy vatohara mandritra ny andro maromaro handrisihana ny hipetraka. Ny famporisihana ny fametrahana any amin'ny substrate voajanahary dia mety mitaky fepetra fanampiny, toy ny fametrahana taila fametrahana amin'ny vatohara na fanesorana tanana makroalga avy amin'ny faritra alohan'ny hipetrahana satria ny zana-kazo dia voasakana tsy hipetraka amin'ny haran-dranomasina misy rakotra macroalgal avo. ref
Mametraka Larvae amin'ny Substrates
Ilaina ny fisainana sy ny drafitra sasantsasany mba hisafidianana sy hanomanana substrates sahirana. Matetika ny fonosana terra na vatosokay vita amin'ny vatosokay, plastika vita amin'ny seramika, na fanamboamboaram-bary. Amin'ny ankapobeny, ireo toetra izay mahasarika ny lava-pirinty dia ahitana 1) biofilms ary (ny sasany tsy misy) algoma (CCA) sy 2 (karazan-kiran'ny hazavana) sy ny 'lakana sy crannies'.
Biofilma sy CCA - Amin'ny ankapobeny dia tanteraky ny substrat 'conduction' ao anaty ranomasina manta izy io, tsara kokoa ao amin'ny tontolo ivoho, mba hahafahan'ny zavamiaina manaingoana mamboly ny velaran-tany sy maka tahaka ny 'fofona' voajanahary amin'ny haran-dranomasina. Na izany aza, ny fifehezana bebe kokoa dia tsy tsara kokoa foana, satria ny zavamananaina toy ny ahidrano, spaonjy, ary ny kankana dia mety hanjanaka substrate koa sy hifaninana na hihinana ireo olitra haran-dranomasina vao tafapetraka. Mety ho azo atao ny misoroka ny filàna famerana raha misy loharano misaraka ho an'ny ahidrano crustose coralline tsara. Raha misy loharano manamora ny CCA mora azo (ohatra amin'ny tranoben'ny kolontsaina miorina amin'ny tany), dia azo angonina, vovoka na vovoka kely, ary apetraka amin'ny sehatra honenana tsy misy fepetra sy milamina. Na izany aza, sarotra ny mamantatra ny CCA. Ny ankamaroan'ny haran-dranomasina mihetsiketsika dia tsy mandova marika avy amin'ny ray aman-dreny ary tsy maintsy mahazo azy ireo avy amin'ny tontolo iainana aorian'ny fametrahana azy. Noho izany, raha tazonina ao anaty tanky ireo mpivahiny mandritra ny fotoana maharitra, dia potipotika na fasika (na zanatan'ny haran-dranomasina babo hafa) no azo apetraka ao anaty tanky ho loharanom-boaloboka simbiotika.
Toerana maizina sy cryptika - Ampifandraisina amin'ny ankapobeny izy ireny. Ny fametrahana eo amin'ny teboka iray azo aseho amin'ny karazana sokitra rehetra dia mety hamporisihana amin'ny fanolorana azy amin'ny toerana ambony. Mety ho tsara ihany koa ny fametrahana azy ao anaty toerana maranitra, toy ny eo amin'ny takelaka iray, na ny fametrahana marika amin'ny sotrom-bidy misy fantsona fantsona. Ny fampihenana ny hazavana koa dia mety hampihenana ny habetsaky ny fitomboan'ny alaola.
Ny fametrahana ny SELELO eto amin'ny ranomasina dia napetraka teo amoron-dranomasina talohan'ny fananganana larvae mba hampivelatra ala misy alkaola, bakteria ary micro-organism. Sary © SECORE International / Paul Selvaggio
Amin'ny toe-piainana tsara dia matetika ny larva dia mipetraka ao anaty fatorana goavambe, izay tsy maneho ny vokatra faran'izay mahomby indrindra raha afaka mampihena ny tahan'ny fahabangana. Ho an'ny famerenana amin'ny laoniny, ny tanjona dia ny hanomezana fitaovana izay manintona ny isam-ponenana mba hanatsara ny fahaiza-manao, kanefa manome toerana azo antoka ho an'ny kolon-tsaina hitombo sy hivoaka.
Tanjona sahaza ho an'ny famerenana amin'ny laoniny mahomby ny fananana vokatra farany vato harana velona iray isaky ny vatan'ny substrate hambolena amin'ny haran-dranomasina. Ny hakitroky 'ideal' ny mpiorina manomboka isaky ny substrate unit mba hiteraka sisa velona dia tsy fantatra, fa ny tetikasa teo aloha dia milaza fa ny hatevin'ny manodidina ny 10-50 ny isam-ponina isaky ny substrate dia mety. Ireo mpiorina dia tokony avela tsy hisavoritaka mandritra ny 1-2 herinandro hametahana mafy ary hanombohana ny fametrahana ny taolana. Azo isaina ny mponin-tany, na mampiasa mikraoskaopy na maso amin'ny alàlan'ny jiro manga (satria matetika ny hazavan'ny haran-dranomasina dia mamiratra maintso eo ambanin'ny hazavana manjelanjelatra izay mahatonga ny mpifindra monina hahatakatra kokoa).
Ny fantsom-pitobiana dia manamboatra "fiara" iray hanaterana vatohara ho an'ny vatohara ary koa ny toeram-ponenan'ny vatohara voalohany. Noho izany, izy io dia sady samy manana ny asany ara-javakanto sy ara-tontolo iainana, ary ny fandrosoana goavana amin'ny famerenana amin'ny famerenana ny haran-dranomasina dia azo avy amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fananganana. Ity dia lafiny iray amin'ny fikarohana momba ny famerenana amin'ny laoniny avy amin'ny SECORE, izay mikendry ny hanatsara ny fanorenana substrate amin'ny fomba mahomby amin'ny fikarakarana, ny famolavolana ny vatohara, ary ny fanamafisana ny fitsaboana tsara kokoa. SECORE mizara ity teknolojia ity miaraka amin'ireo fikambanana mahafeno fepetra; Mifandraisa amin'ireto fanazavana fanampiny ireto.
Fampitomboana ny SECORE Seeding Unit miaraka amin'ny vatoharan-dranomasina lehibe maniry eo akaikin'ny foibeny. Sary © Valérie Chamberland / SECORE International
Ny Coral izay efa nahomby tamin'ny fametrahana onjam-panafody toy ny kilaometatra na tetrapods dia mbola ilaina outplanted amin'ny haran-dranomasina mba hanampiana ny fanarenana ny haran-dranomasina.
Ity dingana ity dia mitaky fandaminana sy fiomanana lehibe mba hisafidianana sy hananana tohodrano.
Ny fitondran-tena bebe kokoa dia tsy tsara foana satria mety hitarika fifaninanana bebe kokoa amin'ny vatohara vao voapetraka.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fanamafisana an'i Larval Supply and Recruitment dia afaka manamboatra ny haran-dranomasina amin'ny alim-pito voadonamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVideo SECORE - Coral Larva amin'ny move